I-schnitzel, isitya esiqhelekileyo sase-Austrian | Ukuhamba kwe-Absolut
Kuhambo ngalunye ukuya Ostriya kufuneka ugcine usuku olunye itafile kwindawo yokutyela yemveli ukuze unike ingxelo entle ngokutya okulula okukukutya kwesizwe: Schnitzel.
Ukuze kube nzima, igama elichanekileyo lesi sidlo esithandwayo I-Wiener schnitzelOko kukuthi, "iViennese steak." Oku kungasinika umkhondo malunga nemvelaphi, isixeko sase EVienna, nangona siza kubona kamva ingumcimbi ongaxoxwa.
1 Imvelaphi yeSchnitzel
2 I-Wiener Schnitzel yokwenene yenziwa njani
3 Ungayityi phi iSchnitzel kuhambo lwakho oluya eVienna
3.2 Umzobo weeflmüller
3.3 Indawo yokutyela ikhefi
Uxwebhu lokuqala apho igama le-Wiener Schnitzel livela khona liyincwadi yokupheka ukusukela ngonyaka we-1831. Imalunga nodumo Incwadi yokupheka kaKatharina Prato, apho kuchazwa ubungakanani bezinto ezininzi eziqhelekileyo zase-Austrian nezaseJamani eJamani. Ikhankanya i Eingebröselte Kalbsschnitzchen, enokuguqulelwa njenge "Iinqayi zenyama yenkomo."
Kodwa isitya esinjalo esidumileyo sifanelwe yimvelaphi eyimbali. Nangona ukunyaniseka kwayo kungathandabuzeki, kukho ibali elibanzi elidumisa ikota yekota ngokwakhe. UJoseph radetzky njengokwazisa iSchnitzel eOstriya.
Imbali ithi uMarshal Radetzky wazisa iSchnitzel eVienna esuka e-Itali
URadetzky ngewayethanda ukutya esi sidlo simnandi ngexesha lakhe lokoyisa emkhosini kumantla e-Itali. Ekubuyeni kwakhe, umlawuli UFranz Joseph I wase-Austria Wamthumelela ukuba amxelele zonke iinkcukacha. Esikhundleni sokumxelela malunga nezicwangciso kunye neemfazwe, uRadetzky wamxelela ukuba ufumene isidlo esimnandi se-Lombardy veal. Wathandwa yile ntsomi, umlawuli ngokwakhe wambuza iresiphi, eyathi yakhawuleza yaduma kwinkundla yasebukhosini.
Ababhali-mbali bayiphikisile le ntsomi: kwakude kudala ngaphambi kweSchnitzel e-Austria, iiflethi zenyama eyahlukeneyo zazisele ziphekiwe, zosiwe okanye zaqhotswa. Nangona inyama ibiyimveliso efikeleleka kuphela kwiiklasi ezityebileyo, indlela yokulungiselela ilula, ebenegalelo ekwandiseni esi sidlo.
I-Wiener Schnitzel yokwenene yenziwa njani
Nangona kukho umahluko, akukho namnye uphambuka kakhulu kude kwi iresiphi yoqobo, leyo ngendlela elula. Abapheki abalungileyo baseAustria bayavuma ukuba esinye sezitshixo zokulungiselela iSchnitzel elungileyo lukhetho kunye nokusikwa kwenyama. Yinkomo ngokubanzi, nangona kukho iiresiphi ezisebenzisa ezinye iintlobo zenyama.
Uyenza njani iSchnitzel
I-veal iyanqunyulwa ibe ngamacwecwe amakhulu ngokumila kwebhabhathane. I-canon iyalela ukuba ubukhulu bayo bube malunga neemilimitha ezi-4. La ngamanyathelo ekufuneka elandelwe:
Ukulungiswa kwenyama. Kuqala kuya kufuneka ubethe ngobumnene iifillets de zibe zicabalele kwaye wandise kancinci. Ngaphambi kokubetha, yongeza ityuwa kunye nepepper.
Emva koko qhubeka uye isonka: Iifillets zihlanjwa ngobisi, emva koko zagalelwa umgubo, emva koko zahlanjwa ngeqanda elibethiweyo kwaye ekugqibeleni zadlula kwi-breadcrumbs. (Kubalulekile: sukuzityumza iimvuthuluka zesonka, zibambelele kwisiteki sendalo ngokwendalo).
Inyathelo lokugqibela yile Qhotsa, kwipani enkulu yokuqhotsa apho kugalelwa isinqatha okanye ibhotolo kubushushu obuyi-160 ° C. Xa ifumana umbala wegolide siya kwazi ukuba lixesha lokuba sizise imisonto, ekufuneka idade emafutheni ukuze inyama ifane. .
I-schnitzel kufuneka ifry ngokulinganayo
Indlela yesiko yokukhonza iSchnitzel e-Austria kukwipleyiti enkulu ejikeleziweyo ehamba nayo Hombisa. Oku kungohluka kakhulu: iletisi exutywe nokunxitywa kwe-vinaigrette, iichives okanye itswele enqunqiweyo, isaladi yeetapile, i-asparagus emhlophe, isaladi yamakhukhamba okanye iifriji zaseFrance ezineparsley. Kwakhona, kwiivenkile ezininzi zokutyela zase-Austrian uninzi lwabapheki bongeza i-wedge yelamuni kunye negqabi leparsley.
Ungayityi phi iSchnitzel kuhambo lwakho oluya eVienna
Njengesitya esilungileyo sesizwe, iSchnitzel ibonakala phantse kuyo yonke imenyu kwindawo nganye yokutyela kwikomkhulu laseAustria. Nangona kunjalo, kuphela kwezinye zazo ezilungiselelwe ngemigangatho esemgangathweni eyenza ukuba ibe sisidlo sangokuhlwa. Nazi ezinye zazo:
Ivenkile yokutya yosapho yakudala kwindawo yaseNeubau enemihombiso ye-rustic, exatyiswa kakhulu bobabini eViennese kunye nabakhenkethi ngamaxabiso ayo aphantsi. Izahlulo zinesisa kwaye umoya uyathandeka.
Indawo yokutyela eyaziwayo esembindini weStephensdom, apho abalungiseleli abanxiba khona iqhina kwaye amaxabiso sele ephezulu. I-Schnitzel yazo inkulu kakhulu kangangokuba ayinakulunga kwipleyiti. Umbono wokubona. Kwaye inkalakahla, ewe.
Indawo yokutyela ikhefi
Ngaphandle kwegama layo, ngaphezulu kwekhefi, le yindawo yokutyela ekhethekileyo apho umpheki elungisa izitya zemveli zaseOstriya, ngokunyaniseka elandela iiresiphi zentsusa kunye nokusebenzisa izithako ezikumgangatho ophezulu. Apha iSchnitzel iba ngumsebenzi wobugcisa, kufanelekile ukuhlawula ngaphezulu ukuze uyonwabele. Ukongeza, ehlotyeni unokutya isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa kwindawo entle emnandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Schnitzel, isitya esiqhelekileyo sase-Austrian